Israel iyo kooxaha mintidka ee jiidda Gaza oo ku heshiiyey xabad joojin, kaddib isku-dhacyo dhiig ku daatay oo maalmo socday. – Radio Daljir
Israel iyo kooxaha mintidka ee jiidda Gaza oo ku heshiiyey xabad joojin, kaddib isku-dhacyo dhiig ku daatay oo maalmo socday.
Qahira, Mar 13 -Dowladda Israel iyo dhinacyada hubaysane e falastiiniyiinta ee ka dagaalama Marinka Gaza ayaa ku heshiiyeey xabad-joojin lagu hakinayo iskudhacyo halkaasi ka socday muddo 4 maalmood ah.
Xabad-joojintan oo ay ka odayeyneysay dowladda masaarida ayaa hirgashay, iyadoo aan la soo sheegin wax weeraro iyo dagaalo ah oo u dhexeeya kooxaha falastiiniyiinta iyo Militariga Israel.
Ugu yaraan 25 qof oo falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay duqaymihii dhinaca cirka ahaa ee tan iyo jimcihii ka socday jiidda Qasa.
Saraakiisha Xamaas ayaa sheegaya in Israel ay ogolaatay in ay joojiso bartilaameedsiga hogaamiyayaasha kooxaha mintidka ah ee falastiiniyiinta , haddi la doonayo in ay iyaguna joojiyaan gantaalada ay ku ganayaan dhinaca magaalooyinka koonfureed ee Israel.
Rabashadaha afartii maalmood ee ugu dameeyey ka dhacayey jiidda Gaza ayaa waxaa kiciyey weerar ay diyaaradaha dagaalka ee Israel ku dileen hogaamiye minitd ah oo ka tirsanaa gudiyadda iskacaabinta ee shacbiga ah ee falastiiniyiinta.
Falastiiniyiinta ayaa dilka hogaamiyahaasi uga jawaabay gantaalo ay ku ganeen magaalooyinka ku yaalla koonfurta Israel, waxana ay isralei intaa wixii ka dameeyey kor u qaaday weerarada ay ku haysay jiidda Qasa.
Qasaaraha Israel ka soo gaadhay gantaalada falastiin aya ayaraa, iyadoo sabab u tahay gantaalada Iron Dome ee Israel oo qabtay illa 50 gantaal oo laga soo riday dhinaca Gaza.
Maraykanka ayaa canbaareeyey gantaalada falastiiniyiinta ,waxana uu ku tilmaamay wax fuleynimo ah, halka jaamacadda carabtun ay weerarada Israel ku tilmaameen xasuuq.